China Palmitoyl Tripeptide-5 fekitari uye vagadziri | JYMed
Product zita: Palmitoyl Tripeptide-5
Molecular Weight: 839,959 g / mol
Mafomu: Smooth ganda, Anti kuchembera
Palmitoyl Tripeptide-5 rinoumbwa namaketani amino acids, uye anokwanisa zvinopfuura Epiderme e kupinda vanyura dermis, apo kunomutsa collagen kugadzirwa uye utano tishu kukura. It ukurumidze kwete chete kukwira collagen usage paganda, asi ongororo mangwanani dzinoti peptide ichi zvakare anokwanisa kukurukura ganda masero uye kudzivirira kubudisa chepfu pinda navo kukuvadza. The chirungiso anoita izvi mimicking muviri wechisikigo kukurukurirana zvigadziriswe kuti kuudza masero zvokuita. mhando iyi kukurukura kunobatsira ganda masero kuti kana chomumba kunze tsvina kana ichiti inert. Palmitoyl Tripeptide-5 dzinongoitika mamiriro ndechokuti ane mvura zvakajeka kuti haana hwema uye mvura soluble. peptide Izvi zvinogona kuwanikwa zvinoverengeka ganda kuchengetwa zvigadzirwa, asi rinowanzoshandiswa mune Anti-kuchembera mumakenduru uye chiso serums. Palmitoyl Tripeptide-5 rinoshandiswa inoverengeka yakasiyana Anti-kukwegura zvigadzirwa nokuti anokwanisa yayo kukurukurirana ganda masero uye rinowedzera collagen kugadzirwa. , Ganda makasimba Young-achitarisa hazvibviri pasina collagen, uye mukuru ganda rako awana, shoma collagen inobereka. Makambani kuti pave Anti-kuchembera serums uye mumakenduru vari kushandisa Palmitoyl Tripeptide-5 kwete chete nokuti anoudza ganda masero kuti vaonekere collagen kugadzirwa sezvingatarisirwa, izvi zvinoita kwazvo kubudirire, sezvo dzimwe zvinogadzirwa kuti ane collagen ringave gobvu kuti zvakanaka zvinopfuura ganda . Nekuti Palmitoyl Tripeptide-5 inoshanda kubva mukati kuti kuwedzera collagen kugadzirwa, unogona kuona migumisiro iri nani chaizvo kupfuura zvawaizodya kana iwe akashandisa ruomba kana serum kuti rine collagen kubva mhuka tishu. Nepo zvidzidzo pamusoro Palmitoyl Tripeptide-5 vachiri mangwanani dzavo chichiri, pane mishumo shoma chero chakakomba nemishonga pamusoro peptide ichi. Zvisinei, kana une hanya ganda, unogona sei kuva Anti-kukwegura chigadzirwa tune peptide ichi. Zvimwe neutachiona vari Hwakatsvuka ganda, anopedza panguva nzvimbo chikumbiro, uye mapundu. Kana kuona chero nyaya idzi apo achiedza Anti-kuchembera chigadzirwa kuti rine Palmitoyl Tripeptide-5, unofanira kunobvunza dermatologist wako pakarepo kuziva kana kana kwete peptide ari kukonzera maitiro kana kana mumwe chigadzirwa kwose kungava nani kusarudzwa iwe. "Kuvimbisika, Innovation, Rigorousness, uye kushanda zvakanaka" ndiro anosimbirira pamuviri kwedu yakasimba yenguva refu kuti kusika anorenda pamwe vatengi kuti yakawiriranwa reciprocity uye dzekuno Mubayiro Wholesale Price zvizorwa Raw Material Skin Repairing Palmitoyl Tripeptide-5 / Syn-coll / DEVI-kvk powder, rutsigiro hwako simba redu nokusingaperi! Noushamwari vatengi kumba nekumhiri kunoshanyira kambani yedu. "Kuvimbisika, Innovation, Rigorousness, uye kushanda zvakanaka" ndiro anosimbirira pamuviri kwedu yakasimba yenguva refu kuti kusika anorenda pamwe vatengi kuti yakawiriranwa reciprocity uye dzekuno Mubayiro Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5 powder, Syn-coll, You nguva dzose kuwana zvigadzirwa uye negadziriso unofanira kuva boka redu! Welcome kuti vabvunze pamusoro yedu chigadzirwa uye chero tinoziva uye tinogona kubatsira car kupembedza nhengo. Tiri kutarisira kuti vashande newe nokuda takunda-zvisamumirira.